Angolà: Niteraka Adihevitra Mikasika Ny Fanavakavaham-bolonkoditra Ny Fandroahana Mpanao Gazety Avy Ao Amin’ny Trano Fisakafoanana · Global Voices teny Malagasy
Angolà: Niteraka Adihevitra Mikasika Ny Fanavakavaham-bolonkoditra Ny Fandroahana Mpanao Gazety Avy Ao Amin'ny Trano Fisakafoanana
Voadika ny 14 Oktobra 2018 13:06 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Ελληνικά, Italiano, русский, Français, Português
Ireo fitafian'i Hossi Sonjamba tamin'izay andro izay | Sary nampiasaina miaraka amin'ny fanomezandàlan'i Hossi – 26 Aogositra 2018
Niteraka resabe tanaty tambajotra, nitarika ho amin'ireo adihevitra mikasika ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny fanilikilihana ao Angolà ny fandroahana an-terisetra mpanao gazety iray avy tao amin'ny trano fisakafoanana iray lehibe tao Luanda.
Ny 26 Aogositra teo, mpanao gazety sady mpikatroka mafana fo iray, Simão Hossi, no niditra tao amin'ny trano fisakafoanana Café Del Mar niaraka tamina andiana namana. Araka ny toromarik'ireo mpitantana, mpiasa roa no nanaraka an'i Hossi raha nandeha tany amin'ny trano fivoahana izy. Nohetraketrahan'ireo mpiasa sy noroahany tao amin'ny trano fisakafoanana i Hossi noho izy ratsy fitafiana.
Tohin'izay, nanao Facebook i Hossi ary naneho ny heviny tao anaty lahatsoratra mikasika ny zavantranga :
Omaly, 26 Aogositra, nitsidika ny Ihla de Luanda aho, niaraka tamin'ireo namako 3 lahy, ny iray teratany Amerikàna izay noho ny asany no naha tao Angolà azy, ireto avy izy ireo Jeremias Dito Dali, Massilon Chindombe, ary Rudy Massamba izay tonga avy any Washington DC.
(…) Raha mbola teo ampitadiavana toerana ho anay hipetrahana iny indrindra, nanapa-kevitra ny ho any amin'ny toerana fidiovana aho, ary, koa satria tsy fantatro ny toerana misy azy, nanontany mpiasa iray aho, nilaza izy ireo fa tonga dia mandeha mahitsy ary satria sahirana izy, ary tsy hitako ilay izy,. nanontany vehivavy mpiasa iray mpanadio trano aho, ny navaliny haingana be tamiko dia ny hoe avy aiza aho, novaliako tahaka izay namaliako an'ilay mpiasa tao amin'ny trano fisakafoana ihany izy fa nitady trano fidiovana aho, natorony ahy ilay izy ary dia nampiasaiko.
Raha vao tafavoaka ny trano fidiovana aho, dia nifanehatra taminà mpiasa nofosana misahana ny fiarovana anatiny, 4 hatramin'ny 5 teo ho eo, nametra-panontaniana tamiko momba izay nataoko, izay niaviako ary noteren'izy ireo aho hanaraka azy avy eo, nanontaniako azy ireo izay toerana tiany hitondràna ahy. Teo dia nampiasa hery izy ireo, ny iray tamin'ireo nanipy ahy taminkerisetra tany ivelan'ny trano fisakafoanana sahala amin'ny zazakely ka nampitsirara ahy tamin'ny tany, io nitondra ahy io ihany koa no mbola nikapoka ahy, ary fanampin'izany, niteny koa izy ireo fa tsy toerana tokony ho ahy io, na dia nanitrikitrika mafy aza aho fa misy olona 3 hafa miaraka amiko.
Fa mikasika an'ireo fitafiako, nanao kapa flip-flops (skobidoa) amin'izao fotoana izao aho raha ny marina, nanao pataloha ara-dalàna ary lobaka lava tanana, nisy ireo olona hafa nanao pataloha fohy sy nanao kapa flip-flops, nefa izaho ihany no tsy nahaiza-miaina.
Ho ahy, tsy niasa irery ireo mpiasan'ny fiarovana ireo, ny mpitantana ny trano fisakafoanana no niaro azy ireo.
Nozaraina betsaka teo amin'ny media sosialy ilay tantara ary olona marobe no nitsikera ampahibemaso sy nanohitra an'ireo fihetsik'ilay trano fisakafoanana — anisan'izany ireo efa mpisakafo hatry ny ela tao. Nasaina teo amin'ny fantsona fahitalavitra be mpijery indrindra ao Angolà. TV Zimbo i Hossi mba hiresaka momba ny zavanisy.
Tao anaty famoahana tao amin'ny Facebook, izay avy eo navoaka tao anaty gazety O País, nanamafy ny mpanolotsainan'ny filohampirenena, Ismael Mateus, fa iray monja amin'ireo tranga an'arivony miseho ao amin'ny firenena io raharaha mikasika ny fanavakavaham-bolonkoditra natao tamin'i Simão Hossi io.
Araka ny voalazan'i Mateus, ny fanavakavaham-bolonkoditra ao Angolà dia tsy zavatra vaovao, saingy aleon'ireo olona miseho ho tsy mahalala na inona na inona. Any anatin'ireo orinasa sasantsasany, hoy izy nanazava, ny fananana hoditra maivana kokoa dia pasipaoro iray ho an'ny asa na tombony kokoa amin'ny fomba fikarakaràna.
Mitranga eo anoloantsika io ary raha tsy dia raharahiantsika io, hitohy hatrany ireo zavatra ireo. Indray andro any, rehefa hisy tsy hita ny lohany ary hisy loza henjana hitranga, tsy hisy olona hahatsiaro ilay olona izay niteny hatry ny ela hoe mila ifanakalozantsika hevitra ny mikasika ny fanavakavahana atao amin'ny mainty hoditra maro an'isa.
Ny fanehoankevitr'ilay trano fisakafoanana
Mba ho fiarovantenany, nanoratra ilay trano fisakafoanana fa ratsy sady tsy azo ekena ny fomba fitafin'i Simão Hóssi. Araka ny filazan'izy ireo momba ny zava-nitranga, nanatona an'i Hossi ny mpiasa iray mpanadio trano izay nanatsiny azy noho ny fitafiny tsizarizary. Nampilaza ny lehiben'ny fiarovana avy eo ny mpitantanana ny trano fisakafoanana izay nilaza tamin'i Hossi mba handao ny toerana, fa niteraka tsy fahazoana aina ho an'ireo mpisakafo hafa.
Tao ivelan'ny trano, nantsoina ireo mpitandro filaminana nanao fisafoana teo amin'ny faritra mba hanelanelana amin'ny anaran'i Siamo hossi, izay nilaza fa nosetrasetraina izy. Tsy noraharahian'ireo polisy izany satria tsy nahitany soritra fampiasàna heritsetra teny aminy.
Nizarazara ireo mpampiasa Aterineto momba ilay trangan-javatra
Tao anaty famoahana tao amin'ny Facebook, nilaza i Joaquim Lunda, naman'i Hossi fa tsy azony hoe nahoana no misy ny fisehoanjavatra sahala amin'io:
… Efa nandeha im-betsaka tamin'io toerana izay nolazainareo io aho, nanao pataloha fohy sy nanao skobidoa ary androany aza mbola toy izay ihany, nanao pataloha fohy sy nitondra skobidoa, nefa mandray ahy tsara ny mpiasa… mety ho nisy fifanakalozana tamin'ny iray tamin'ireo mpiasa ireo ve ianao, na zavatra sahala amin'izany? heveriko fa tena mahagaga izany, ny zavatra vao avy nolazainao teo
Manenjika an'i Hossi i Miguel Quimbenze, amin'ny filazàna fa nanivaiva ny mpiasa mpanadio trano izy:
Ry namana ianao no nitarika an'io fisehoan-javatra io, novingavingainao ny mpiasa mpamafa trano, tonga ny mpiasan'ny fiarovana niainga avy amin'ny angom-baovao avy tamin'io ramatoa io. Mhevitra aho fa ara-dalàna tsara ny fanontaniana napetrak'ilay ramatoa taminao.
Nandritra izany fotoana izany, mpampiasa Aterineto iray, André Mfumu Kivuandinga, izay nanaraka ny fisehoan-javatra, no namporisika an'i Hossi hitondra lavitra ny raharaha araka izay mety:
Ry namana, tokony handeha lavidavitra kokoa ianao amin'io. Tsy tokony hanaiky ny tsy rariny na ny fanosihosena ianao. Mitovy hevitra aminao aho, raha mila ny fanampiako ianao, fantatrao izay ahitana ahy. Ho an'izay olana izay, afaka miasa mikasika an'io aho.
Niantsampazan'i Salgueiro Vincente, mpanolotra fandaharana, ny fiarovana an'i Hossi, tamin'ny alalan'ny fampiasana Facebook mba hikarakarana hetsika iray teo akaikin'ilay trano fisakafoanana, ary hatramin'ny fanaovana ireo adihevitra, hira sy tononkalo.
Ho valin'ny antson'i Vincente mba hanao hetsipanoherana, nasongadin'i Elísio dos Santos Magalhães ny filàn'ny firenena maneho firaisana hina hanohitra ny fanavakavaham-bolonkoditra.
Hetsika natao ho fanohanana ilay mpikatroka mahery fo sady mpanao gazety Hossi Sonjamba / Sary nampiasaina nahazoana alalàna
Mifamatotra avokoa isika rehetra ao anatin'ity tolona ity, ny fanavakavaham-bolonkoditra mampizarazara, ny foko, ny fitsaràna an-tendrony ara-bolonkoditra; ampy, ampy, ampy, ampy, ampy izay, Angolà tsy misy fanavakavaham-bolonkoditra, iray ihany isika! Ary tena sambatra, ampy izay ny fitsaràna an-tendrony mikasika ny volon-koditra, tena ampy, indray andro efa nijaly tamin'io aho, tena naratran'ireo rafozako taloha aho ary roapolo taona taty aoriana, nentiny ny vadiko satria metisy aho, vokatry ny fanavakavaham-bolonkoditra ao anaty fianakaviana, potika ny fianakaviana ao Angolà, ampy ampy ampy izay.
Ny 9 Septambra teo, andro nitrangan'ny tantara, nizara ireo sary mikasika ny hetsipanoherana nanoloana ilay trano fisakafoanana ireo mpanao fihetsiketsehana
Fanehoana hery nanoloana ny trano fisakafoanana / Sary nampiasaina nahazoana alalàna – Hossi Sonjamba (09.09.2018)
Araka ireo famoahana nataon'i Hossi tamin'ny tambajotra, mbola manadihady mikasika ny raharaha ireo tomponandraikitra angoley